Ebee ka comctl32 DLL di? - Faịlụ
Isi > Faịlụ > Comctl32.dll na-efu efu - a na-ajụkarị ajụjụ
Comctl32.dll na-efu efu - a na-ajụkarị ajụjụ
Ebee ka comctl32 DLL di?
Budata comctl32. faịlụ dll (Malware nwalere 100% Ọcha)
SHA256 Nlekọta: bdcb35e340b3ba7082aec16312021db733ce16be38349616aaf1419ec8bf2ca2
CRC32: Agugu 13272
Akwụkwọ ndekọ faịlụỌnọdụ: C: \_ Windows \_ System32 \_ C: \_ Windows \_ Temp WD94AF-D053-4381-B105-0D815D5 ... C: \_ Windows \_ WinSxS \_ amd64_microsoft-windows-shell ...
Kedu ka m ga-esi dochie comctl32 DLL na Windows 10?
Olee otúDochie Comctl32. wdg
Budata ihe ndị ahụ furu efuOchie 32.wdgfaịlụ. ...
Wepu faịlụ nbudata ma ọ bụrụ na ọ bụ. zip-file ụdị. ...
Wụnyenke na-efuOchie 32.wdgfaịlụ na folda kwesịrị ekwesị na kọmputa. ...
Malitegharịa ekwentị ahụ na kọmputa site na ịpị bọtịnụ 'Start' na ịhọrọ nhọrọ 'Malitegharịa ekwentị'.
Ndewo Windows Universe! Michael na Windows Club na-ewetara gị edemede ọzọ nke na - agbaghara koodu njehie site na faịlụ. Ugbu a, ọtụtụ n'ime njehie ozi a Windows onye ọrụ nwere ike na-ezute ihe na-akpata efu efu DLL faịlụ ma ọ bụ faịlụ. N'isiokwu a anyị ga-elele ụfọdụ mmezi izugbe ị nwere ike ịme ma echegbula onwe gị maka ihe anyị jikọtara na nkọwa ahụ agaghị emebi ma ọ bụ na-efu.
DLL na-anọchizi ụlọ akwụkwọ Dynamic Link. Na mpụga nke ngwa anyị na-arụ na Windows 7, 8, na 10 na ọtụtụ sistemụ ndị ọzọ. Imirikiti ngwa anaghị ezucha n'onwe ha ma chekwaa koodu ahụ na faịlụ dị iche iche.
Mgbe koodu achọrọ, achọrọ faịlụ dị n'ime ebe nchekwa ma jiri ya. Mgbe ahụ nke ahụ ga-emepe sistemụ gị maka nsogbu, ọ bụrụ na ngwanrọ ahụ enweghị ike ịchọta faịlụ DLL na ajụjụ ma ọ bụ ọ bụrụ na e mebie faịlụ DLL mgbe ahụ ị ga-enweta ozi na faịlụ ahụ na-efu. I nwere di na nwunye nke kwere omume ngwọta.
Gbaa ngwa nyocha usoro ihe eji arụ ọrụ. Gbaa Dis sim idozi ma ọ bụ tinyegharịa sọftụwia na - akpata kọmpụta ikuku. Detuo DLL site na sistemụ ọzọ ma weghachite ya na PC gị, budata faịlụ DLL site na ndị ọzọ.
Zọ kachasị nchebe iji rụkwaa njehie DLL bụ ị na-agba ọsọ System File Checker, nke ga-anọchi faịlụ furu efu ma ọ bụ mebiri emebi. Ugbu a, ka anyị mepee iwu ozugbo na ikike onye nchịkwa na Windows 10. Mgbe ahụ pịnye ma ọ bụ detuo isiokwu anyị jikọtara s f c, ugbu a nyochaa okwu wee kụrụ ịbanye.
Jide osisi mmanya Snickers ugbu a ka nke a na-ewe minit 10-15. Ozugbo emere ya, ikwesiri ịmalitegharị kọmpụta gị. Ọ bụrụ na edozibeghị nsogbu ahụ, gbalịa na-agba ọsọ DISM.
Mgbe a iwu ozugbo na nhazi ùgwù, pịnye DISM slashonline ịsụ na ịgba ọhịa dị ọcha - elu ịsụ na ịgba ume weghachi ike, niile isone okwu na pịa Tinye. Jidere ụlọ mmanya Snickers ọzọ n'ihi na nke a ga-ewe oge ọ bụla na mgbe ọ mechara reboot sistemụ gị mgbe ọ gachara. Na-esote, ịnwere ike ịtụle ịpịpụta DLL site na sistemụ ọzọ yana faịlụ ọrụ wee jiri ndekọ ziri ezi dochie ya na sistemụ gị.
Nke a nwere ike ịpụta na ị ga-edebanye aha DLL ọzọ ma enwerekwa nhọrọ ịchọta DLL na onye nrụpụta ngwanrọ wee budata ya na weebụsaịtị ha. Ugbu a, ọ bụrụ n'ịhọrọ ịgbada n'okporo ụzọ a, gbaa mbọ hụ na enweghị m ike imesi nke a ike na DLL sitere n'aka onye nrụpụta. Nke a bụ n'ihi na o yikarịrị ka ikike DLL nwere ikike nwebisiinka ma ọ bụrụ na ọ sitere na saịtị ndị ọzọ, ị gaghị ekwenye na ọ bụ faịlụ ahụ n'ezie yana na etabeghị ya ma ọ bụ nwee malware agbakwunyere na ya.
Mgbe ahụ enwere ihe m kpọrọ nhọrọ nuklia. Naanị iwepụ wee tinyegharịa sọftụwia ahụ ma dabere na ntọala gị, nke a nwere ike ịbụ nhọrọ ka mma maka oge na isi ọwụwa. Ọ bụ naanị ihe ị ga - ahọrọ ịhọrọ oge na mbọ anyị.
Nwetụla mgbe ị zutere ụjọ dll ụjọ? Chere, n'ezie inwere! Mee ka anyị mata otu ị si mee nke a na nkọwa dị n'okpuru. Maka isiokwu gbasara ya na ọtụtụ puku ndozi ndị ọzọ, ntụzi aka, aghụghọ, hacks, otu-tos na akụkọ Windows 10 kachasị ọhụrụ, gaa na anyị na bọtịnụ thewindowsclub.com na ọwa anyị ebe anyị na-ewepụta ọdịnaya ọhụrụ mgbe niile ga-eme ka ndụ dijitalụ gị bụrụ obere mfe kwesịrị ime.
Daalụ maka ikiri ma nwee ọmarịcha ụbọchị!
Kedu ka m ga esi esi wunye comctl32 DLL na Windows 7?
esiwụnye comctl32.wdgfaịlụ? Detuo na usoro ihe omume 'usoro 01'
Gaa na desktọọpụ.
Họrọ usoro ihe omume (mmemme mebiri emebi)
Right pịa - Họrọ Njirimara.
Site nawindo, họrọ Mepee faịlụ ebe.
Ihe omume mmemme ga-emepe.
Kedu ka m ga esi edozi faịlụ dll efu?
Olee otúndoziihe 'na-efu efu. faịlụ dll''njehie
Ya adịla mgbe ị ga-ebudata a.faịlụ dll. ...
Malitegharịa ekwentị gị na PC. Easiestzọ kachasị mfendoziihena-efu efu. ...
Weghachite ehichapụfaịlụ. Mgbe ụfọdụ, ị nwere ike na mberede ihichapụ a. ...
Malụwa. Mmemme malware mepụtara ọzọ. ...
Weghachi gị usoro. ...
Melite ndị ọkwọ ụgbọala. ...
Njikọ igbe ozi hotmail
Kedu ihe m kwesịrị ịma gbasara COMCTL32.DLL?
Gịnị bụ Comctl32.dll? Comctl32.dll - dll file akpọ 'Common Controls Library' bụ akụkụ nke Microsoft® Windows® Sistemụ mmemme nke Microsoft Corporation mepụtara. Applicationsfọdụ ngwa ma ọ bụ egwuregwu nwere ike ịchọ faịlụ a ka ọ rụọ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ na comctl32.dll na-efu efu, mgbe ọ bụla ịmalitere ngwa / egwuregwu ị nwere ike ịnweta ụdị njehie dị iche iche.
Esi edozi njehie metụtara faịlụ.dll?
Iji dozie njehie metụtara na .DLL faịlụ ịkwesịrị ibudata comctl32.dll ma detuo ya na folda ntinye nke ngwa ma ọ bụ egwuregwu, ma ọ bụ detuo ya n'ime folda sistemụ Windows ma ọ kwesịrị idozi njehie ahụ. Ọ bụrụ na ị maghị otu esi etinye faịlụ a, biko gụọ nkuzi anyị gbasara Otu esi etinye faịlụ DLL.
Kedu ihe kpatara njehie na-ebudata comctrl 32bit?
Spec ezipụta a gosipụtara iji gosi nke ComCtrl mbipute ị chọrọ, mgbe ahụ, ọ bụ OS ka ịchọta ya, dị ka ihe ọ bụla ọzọ DLL. Njehie ị na-ahụ pụtara na usoro 64bit na-anwa ibu 32L DLL, ma ọ bụ na ntụgharị. Nke ahụ nwere ike ịbụ nsogbu ụzọ ọchụchọ, nke ahụ nwere ike ịbụ nsogbu dabere.
Ebee ka m ga-etinye faịlụ DLL na PC m?
N'aka nke ọzọ, ụfọdụ mmemme, ọkachasị egwuregwu PC, chọrọ ka etinye DLL faịlụ na folda egwuregwu / ngwa ntinye. Maka ntuziaka nwụnye zuru ezu, lee Ajụjụ anyị. Chọrọ enyemaka ụfọdụ ịwụnye comctl32.dll? Onye ahịa DLL‑files.com ahụ nwere ike inyere gị aka ịwụnye comctl32.dll nke ọma ma dozie njehie DLL gị kpamkpam.